अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Patrika Nepal
चीन र भारतबीच सीमाको विषयलाई लिएर सधै तनाव हुँदै आएको छ । यो अवस्थामा चीनले ४ खुट्टावाला विश्वकै ठूलो रोबोट याक बनाएको दाबी गरेको छ । चिनियाँ मीडियाका अनुसार यो रोबोटले १६० किलोसम्मको तौल उठाउन सक्छ र १ घन्टामा १० किलोमीटरसम्म हिँड्न सक्छ । चीनको यो रोबोट याकले भारतीय सीमामा पहाडी इलाकाको जासूसी गतिविधि गर्न सक्ने र चिनियाँ सैनिकलाई कठिन परिस्थितिमा यसले हतियारको आपूर्ति गर्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएको छ । चीनको सरकारी मिडियाका अनुसार यो रोबोटलाई विशेष रुपमा त्यस्तो ठाउँका लागि बनाइएको छ , जहाँ मानिसलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी मिडिया सीसीटीभी भन्छ, ‘रोबोट आफ्नो किसिमको विश्वकै पहिलो सबैभन्दा ठूलो र गह्रुँगो हो ।’ एक वयस्कको तुलनामा यो रोबोट लगभग आधा अग्लो छ । ठूलो आकारका कारण यो १६० किलो तौल उठाउन सक्ने क्षमताको रहेको छ । यो रोबोट १० किलोमीटर प्रतिघन्टाको दरमा कु
शिल्पा शेट्टीकी बहिनी शमिताको एकपछि अर्को रहस्य बाहिरीयो
शिल्पा शेट्टीको परिवार निक्कै ठृुलो समस्या बाट गुज्रिएर बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेको छ । करण जोहरको बिग बोस ओटिटि शो मा शिल्पाकि बहिनी शमिता शेट्टीले भाग लिईन् । अहिले सलमानको बिग बोसमा पनि प्रतिष्पर्धा गरिरहेकी छिन् । जब बिग बोस ओटीटीमा शमिता थिईन् त्यतिबेला उनि हेडलाईन बनिरहेकी हुन्थिन् । यो सिजनमा सबैभन्दा बढी चर्चा कसैको भइरहेको छ भने त्यो हो शिल्पाकी बहिनी शमिता शेट्टी, शोमा खेलबाहेक उनको अभिनेता राकेश बापटसँगको निकटतालाई पनि निकै रुचाइएको थियो । यी दुईको केमेस्ट्रीले उनीहरुको सम्बन्धलाई फरक आयाम दिएको छ । खुलेर केही नभने पनि सबैले बुझेका छन् । यससँगै शमिताले आफ्नो पहिलो प्रेमीको बारेमा पनि बताएकी छिन् । शमिता शेट्टीले भर्खरै कार दुर्घटनामा आफ्नो पहिलो प्रेम गुमाएको खुलासा गरेकी छिन् । यो दुर्घटनाले उनलाई पुरै हल्लायो, त्यतिबेला उनी निकै हदसम्म भाँचिएकी थिइन् । यो दुर्घटनाले उन
बिहेको १० दिनपछि बेहुलीको एक पछी अर्को पोल खुलेपछी नयाँ घरमा तहल्का मच्चियो
राजस्थानको बाडमोर प्रहरीले एक बेहुली र उसको साथीलाई पक्राउ गरेको छ। बेहुलीले दलालको माध्यमबाट पहिले तीन लाख लिएर र फर्जी विवाह गरेको आरोप छ। पछि अर्को एक खुलासा पनि भएको छ। ती महिला विवाहित रहेको र उनको २ बच्चा पनि रहेको पाइएको छ। बिहे सकेर भाग्ने उनको योजना थियो। जानकारीका अनुसार बाडमोर जिल्लाको एक पुरुषको विवाह हुन सकेको थिएन। यस दौरान उनको भेट जुझारामसँग भयो। जुझारामले उनलाई विवाह गरिदिने आश्वासन दिए। त्यसका लागि ३ लाख रुपैया मागे। विवाह गर्न इच्छुक ती व्यक्तिले आफ्ना भाईलाई यसबारे बताउँछन्। २७ डिसेम्बरमा बाडमोरको अदालतमा उनीहरुको विवाह हुन्छ। बेहुली पञ्जाबमा बस्ने कोडाबाई हुन्। विवाहकोृ १० दिनसम्म ठिकै थियो। ती महिलालाई पञ्जाब आउनका लागि बारम्बार फोन आएपछि परिवारलाई शंका लाग्छ। तीनै महिलासँग सोधपुछ गर्दा उनको घटनाको राज बताउँछिन्। उनले आफ्नो पहिले नै विवाह भइसकेको र २ सन्तान पनि रह
साउदीमा ठगहरुबाट बच्न त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई दूतावासको आग्रह
साउदीमा ठगहरुबाट बच्न त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई दूतावासको आग्रह काठमाण्डौ – साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई ठगहरुबाट बच्न आग्रह गरेको छ । साउदीमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई लक्षित गरी ठगी गर्नेहरु बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता ठगबाट बच्न दूतावासले सूचना मार्फत आग्रह गरेको हो । साउदीमा बेखर्ची भएर दूतावासको सेल्टरमा बसेका, साथीभाइको आर्थिक सहयोगमा स्वदेश फर्किन प्रयास गरिरहेका, टिकटको लागि ट्राभल एजेन्सीमा गएका श्रमिकलाई विभिन्न बहाना बनाएर ठग्ने क्रम बढेको छ । दूतावासका अनुसार ठगहरुले ट्राभल डकुमेण्ट खर्च, फोटोकपी खर्च, सीसीएमसी फारम भरेको खर्च जस्ता बनावटी शीर्षकका नाममा रकम लिने गरेका छन् । दूतावासबाट निःशुल्क प्रदान गरिने सेवाको लागि पनि बाहिर बसेर पीडितलाई फकाइ अनावश्यक खर्च गर्न लगाउने गरेको दूतावासको भनाइ छ । आफूलाई समाजसेवी भन्नेहरुले नै
बुढेसकालमा महानायक अमिताभ रणबिर बन्न खोजेपछि फ्यानले उडाए मजाक
बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अगाडि बढ्नको पर्याय बनेका छन् । कलाकारहरू जुनसुकै उमेरमा काम गर्न चाहन्छन्। जबकि कोरोना युगका चुनौतिहरु फरक छन् । यो कठिन समयमा, धेरै कठिनाइ संग शूटिंग भइरहेको छ। हालै बिग बीले यससँग सम्बन्धित एक पोस्ट पनि सेयर गरेका छन् । अहिले कलाकारहरु फेरि काममा व्यस्त छन् । नयाँ युगसँग तालमेल राख्दै अमिताभले काममा फर्केको खुसी व्यक्त गर्दै स्टाइलिस फोटो सेयर गरेका छन् ।बिग बीले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा तस्बिर सेयर गरेका छन् । फोटोमा उनी रातो रंगको ज्याकेटमा देखिएका छन् । उनले शीतकालीन टोपी लगाएका छन् र चश्माले आफ्नो शरीर छोपेका छन्। अभिनेता साँच्चै सुन्दर देखिन्छन् र उनको शैली देखेर कसैले पनि उहाँ ८० वर्षको उमेर हो भन्न सक्दैन।तस्बिरसँगै बिग बीले क्याप्सनमा लेखेका छन्-प्यान्गोलिनको मास्क छ, प्यांगोलिनको नाम हुडी, प्यांगोलिनको नाम पनि ट्र्याकसुट हो। अब म काममा फर्किद
जस्तोसुकै स्टन्ट दिन डराउँदिनन् दीपिका, शाहरुखको ‘पठान’मा आफ्नै स्टन्ट दिँदै
काठमाडौं -बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण स्टन्ट दिन रुचाउने कलाकारमा पर्छिन् । उनी आफ्नो स्टन्ट आफैं गर्न रुचाउँछिन् । एथलेट परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएका कारण पनि उनी स्टन्ट दिन डराउँदिनन् । दीपिकाले करियरको सुरुवातमा दुई फिल्म ‘ओम शान्ति ओम’ र ‘चाँदनी चोक टु चाइना’ मा दोहोरो भूमिका निभाइन् । अक्षय कुमारको अभिनय रहेको फिल्म ‘चाँदनी चोक टु चाइना’मा उनले केही स्टन्ट दृश्य दिएकी थिइन् । यिनै दीपिका सिद्धार्थ आनन्दको फिल्म ‘पठान’मा आफैं स्टन्ट दिँदैछिन् । शाहरुख खान र जोन अब्राहमको समेत अभिनय रहेको यो फिल्ममा शाहरुख केही रिस्की एक्सन देखाउँदैछन् । दीपिकाले रजनीकान्तको फिल्म ‘कोचाडैयान’मा दश मिनेटको स्टन्ट दिएकी थिइन् । यो फिल्ममा उनको स्टन्टलाई पिटर हेनले कोरियोग्राफ गरेका थिए । दीपिका पछिल्लोपटक कवीर खानको फिल्म ‘८३’मा क्रिकेटर कपिल देवको श्रीमतीको भूमिकामा देखिएकी थिइन् । यो फिल्ममा अ
साउथ सुपरस्टार रजनीकान्तकी छोरी ऐश्वर्याले पति धनुषसँग अलग्गिने निर्णय लिइन्
काठमाडौ, ४ माघ । साउथ सुपरस्टार धनुष र ऐश्वर्या रजनीकान्त शक्तिशाली जोडीका रुपमा चिनिन्छन् । तर अब यो जोडीले अलग्गिने निर्णय लिएका छन् । साउथ सुपरस्टार रजनीकान्तकी छोरी ऐश्वर्याले धनुषसँग अलग्गिने जानकारी सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आफ्ना फ्यानलाई दिएकी छन् । दुवैको विवाहको १८ वर्ष पुगेको छ । ऐश्वर्या रजनीकान्तका अलावा धनुषले पनि सामाजिक सञ्जालबाट अलग्गिने निर्णय सुनाउँदै आफूहरुको गोपनियताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।‘हामी १८ वर्ष सँगै रह्यौं । यो समय हामी साथी, आमाबाबु, जोडी र एकअर्काको साथी बनेर बस्यौं । यो यात्रामा हामीले अगाडि बढ्नका लागि एकअर्कालाई सम्झियौं र धेरै कुरा भयो । आज हाम्रो बाटो अलग्गिँदैछ । म र ऐश्वर्या एक जोडीका रुपमा अलग हुँदैछौं । हामी अहिले हरेक विषयलाई अलग–अलग किसिमले सम्झिने कोशिस गरिरहेका छौं । कृपया हाम्रो यो निर्णयको सम्मान गर्नुहोला र गोपनियताको अवसर दिनु
प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि युवतीले बर्बाद पारिन् युवकको जीन्दगी, त्यसपछि…?
एजेन्सी । एक युवतीले आफ्ना पूर्व प्रेमीलाई फसाउनका लागि खतरा चाल चालेकी छिन्। उनले एक दुईमात्र नभएर ३ण् वटा फेक इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बनाइन् । ती युवतीले फेक अकाउन्ट आफैंलाई धम्की दिँदै म्यासेजहरु गरिन्। उनले ती म्यासेजहरु पूर्व प्रेमिकाले पठाएको आरोप लगाइन्। ती युवकले आफ्नो ज्यान समेत लिन चाहेको आरोप लगाइन्। यो घटना ब्रिटेनको लिभरपुलको हो। २० वर्षकी कोर्टनी एन्सवर्थ र २२ वर्षीय युवक लुइस जालीको गत वर्ष झगडा भएको थियो। विवाद भएपछि कोर्टनीले जालीको छाडिदिइन्। तर ब्रेकअपपछि पनि कोर्टनीले जोलीलाई आरामले बस्न दिइननन्। उनले एउटा ठूलो जाल बनाइन् र जोलीको जीवन बर्बाद बनाइन्। ती फेक अकाउन्टहरुबाट आफैलाई धम्कीपूर्ण म्यासेज पठाएर कोर्टनीले यसको दोष सबै जोलीमाथि लगाइन्। उनले प्रहरीमा उजुरी पनि दिइन्। त्यसपछि जोली यस प्रकरणमा ६ पटा गिरफ्तार भए। उनीसँग पटकपटक सोधपुछ गरियो। तर जोलीको आरोप
कतार सरकारले बढायो नेपाली कामदारको तलब , कति बढ्यो हेर्नुहोस्
काठमाडौं, पुस ९। कतार सरकारले विदेशी श्रमिक तलब वृद्धि गरेको छ । कतार सरकारले एक हजार रियालभन्दा कम पारिश्रमिक भएका आप्रवासी श्रमिकको पारिश्रमिकमा एक हजार रियालले वृद्धि गरेको हो । नेपालस्थित कतारी दूतावासले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिमहिना एक हजार रियाल अर्थात् ३० हजार रुपियाँभन्दा कम आम्दानी भएका श्रमिकको तलब एक हजार ८०० रियाल अर्थात् ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी पुगेको जनाइएको छ । दूतावासका अनुसार अब खानबस्नको राम्रो व्यवस्था भएका कम्पनीले महिनावारी एक हजार रियल तलब दिनुपर्ने र यस्तो व्यवस्था नभएका रोजगारदाताले मासिक एक हजार ८०० रियाल दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको छ । यसले कतारमा रहेका लगभग एक हजार रियालभन्दा कम पारिश्रमिक लिएर काम गरिरेका एक लाखभन्दा बढी नेपालीले लाभ लिनेछन् । कतारको श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ तलबमान व्यवस्था लागू भएपछि ए
इतिहासमा नै पहिलो पटक साउदीमा अनौठो घट्ना, बिश्व चकित
एजेन्सी : यो साता साउदी अरेबियामा अप्रत्यासित घटना भएको छ । मुस्लिम देश साउदीमा एउटा उन्माद सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना भएको छ । धुमधामका साथ चार दिनसम्म सांगीतिक उत्सव मनाइएको छ । उत्सवमा अन्तर्राष्ट्रिय डीजेहरुले आफ्नो बेजोड प्रस्तुति दिएका थिए । सांगीतिक महोत्सवमा साउदी शाही परिवारको उत्साहजनक उपस्थिति थियो । सांगीतिक माहौललाई शाही परिवार बस्ने दरबार हाउस अफ साउदले स्वागत गरेको थियो । कार्यक्रममा विश्वभरका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको जमघट थियो । टियस्टो, मार्टिन ग्यारिक्स, डेभिड ग्युटालगायत विश्वप्रसिद्ध डीजेको प्रस्तुतिमा शाही सदस्यहरु झुमेका थिए । ‘इतिहासमा नै पहिलो पटक साउदीमा महिला तथा पुरुषले सँगै नृत्य गरेका थिए । यस एतिहासिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ,’ डीजे डेभिड ग्युटेले भने । साउदीको ‘ठूलो क्रान्ति’ को साक्षी बन्दा महिला र पुरुषबीच कुनै विभेद
मन्त्रालयकै गाडी भित्र यौन क्रियाकलाप गर्ने3जना पक्राउ (5652)
जनमैत्री अस्पताल मेरो होईन- रबि लामिछाने (646)
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको मुख्य द्वार प्रवेश गर्ने बित्तिकै खुशीले भक्कानीए तालिवान लडाकु ( भिडियाे सहित ) (509)
असुरक्षित अफगानिस्तानमा सुरक्षा प्रदान गर्दै नेपाली गार्ड (488)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (467)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (395)
खेसरीलालले भने- विध्वंसका जिम्मेवार महोत्सव आयोजक, मलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ
कठै !युरोप पोर्चुगल गएका छोरा यति धेरै वर्षदेखि बे पत्ता छन् ,यता आमा छोरो सम्झेर म र्नु न बाँच्नु भएकी छिन् (भिडियो हेर्नुस्)
१.	सुर्खेतबाट आयो दुख लाग्दो खबर – एकै परीवारका चार जनाको मृत्यु (64)
२.	कुवेतमा क्रेनको ठक्करबाट एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु । हार्दिक श्रद्धाञ्जली (61)
३.	छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? उसोभए आजैबाट यी खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस् (56)
४.	आफ्नै श्रीमतीलाई मालिकसंग कोठामा ना’ ङ्गै भेटेपछि(भिडियो (55)
५.	जापानमा एक नेपालीको मृ*त्यु ! मनमा अलिकति दया भए (R.I.P) लेख्नुहोस (55)
६.	स्कुल बन्द भएपछि ठूलो संख्यामा बालिकाहरु गर्भवती हुन थाले (55)
७.	काठमाडौंको कलंकीमा घट्यो डरलाग्दो घटना (53)
८.	त्रिभुवन विमानस्थलमा आजफेरी यस्तो भयो ! ३ करोड नेपालीको शिर निहुरियो (53)